अनिशाको झु*टको पर्दा’फास बाकी भिडीयो फोटो बाहिरियो , एकपटक यो भिडियो पनि हेर्नुहोस। kanchan alisha | Public 24Khabar
Home News अनिशाको झु*टको पर्दा’फास बाकी भिडीयो फोटो बाहिरियो , एकपटक यो भिडियो पनि...
अनिशाको झु*टको पर्दा’फास बाकी भिडीयो फोटो बाहिरियो , एकपटक यो भिडियो पनि हेर्नुहोस। kanchan alisha
अनिशाको झु*टको पर्दा’फास बाकी भिडीयो फोटो बाहिरियो ,एकपटक यो भिडियो पनि हेर्नुहोस। kanchan alisha
एक साताअघि हरियो केराउको मूल्य प्रतिकिलो १ सय १५ रुपैयाँ थियो । अहिले १ सय २५ रुपैयाँ पुगेको छ । गत चैतमा ब्रोइलर कुखुराको मासु प्रतिकिलो ३ सय २० रुपैयाँ र अन्डा प्रतिक्यारेट २ सय ८० रुपैयाँ थियो ।
अहिले ब्रोइलरको मासु ३ सय ७५ देखि ३ सय ९० रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको छ । त्यस्तै अन्डाको मूल्य प्रतिक्यारेट ४ सय ५० रुपैयाँसम्म पुगेको छ । मंसिरअघि प्रतिटिपर २२ हजार रुपैयाँ पर्ने गिट्टी अहिले बढेर ३० हजार रुपैयाँ पुगेको छ । प्रतिबोरा ६ सय ५० रुपैयाँ पर्ने सिमेन्टको मूल्य बढेर ७ सय, प्रतिकिलो ५७ देखि ६२ रुपैयाँ पर्ने डन्डी बढेर ८५ देखि ९० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ ।
मूल्यवृद्धि भएका वस्तुमध्ये यी केही उदाहरण मात्र हुन् । राजनीतिक अस्थिरतासँगै बजारभाउमा चलखेल बढ्दो छ । मूल्य बढ्नुको खास कारण नभए पनि व्यवसायीले आफूखुसी मूल्य तोकेका छन् । खुद्रा व्यापार संघका अनुसार खानेतेलको मूल्य बढ्नुमा खास कारण नभए पनि आयातकर्ता र मिल सञ्चालकले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको बताउँदै मूल्यमा मनपरी गरेका छन् । पर्याप्त मात्रामा उत्पादन नभएको र माग बढेको जनाउँदै मासु र अन्डाको मूल्य बढाइएको छ । चाडबाड सकिएलगत्तै निर्माण सामग्रीको माग बढेपछि यसको मूल्य पनि चुलिएको छ । बजारभाउ नियन्त्रण गर्ने दायित्व वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको हो । बजार अराजक हुँदासमेत विभागले बजारभाउ नियन्त्रण गर्न सकेको छैन ।
विभाग सरकारको निर्देशनमा चल्ने हुँदा बजार अराजक बन्दै गएको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन बताउँछन् । विभागको अनुगमन बजार सुधारभन्दा राजस्व संकलनमा केन्द्रित हुँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘मूल्य बढ्नुपर्ने कारण छैन । खाने तेल, मासु र निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि कृत्रिम हो । राजनीतिक अस्थिरता र आन्दोलनका कारण यस्तो भएको हो । राजनीतिक नेतृत्वलाई पैसा चाहिएको छ । पैसा बजारबाटै आउँछ, नेतृत्वले पैसा खोज्ने कारणले बजारभाउ बढेको हो,’ उनले भने, ‘मन्त्रालय र विभागबाट नै उद्योगीहरूसँग पैसा माग्ने काम भएको उद्योगीहरू बताउँछन् । यस विषयमा कसले अनुगमन गर्ने ? सरकारकै निर्देशनमा विभाग चल्यो, त्यही भएर बजार सुध्रिएन ।’
अर्का उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिना पनि अहिलेको बजार अनुगमन देखावटी मात्रै रहेको टिप्पणी गर्छन् । उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्षसमेत रहेका उनले भने, ‘अनुगमन नभएको होइन, भइरहेको छ । तर केवल भत्ता पचाउन मात्रै गरियो । व्यवसायीसँगकै मिलेमतोमा ठूलालाई उन्मुक्ति र सानालाई जरिवाना गरियो । बजार सुधार गर्न उद्योग र आयातकर्तालाई कानुनी दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ ।’
विभागको पछिल्लो अनुगमन विवरण हेर्दा पनि यस्तै देखिन्छ । विभागले पुस २३ गते १४ व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन गरेको छ । जसमध्ये तीन वटा खाद्यान्न फर्म र बाँकी कपडा पसल छन् । २२ गते मासु, किराना, निर्माण सामग्री, औषधि, फर्निचर, मदिरा पसलसहित १६ व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन गरेको छ । पुस २१ मा मदिरा स्टोर, पानी उद्योग, किराना पसल, निर्माण सामग्रीसहित १३ फर्ममा अनुगमन गरिएको छ । २० गते पनि खाद्यान्न, मदिरा, किरानासहित १३ वटा फर्ममा अनुगमन गरिएको विभागको तथ्यांक छ । बजारमा विभागले अनुगमन गरे पनि मूल्य नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन ।
उपभोग्य वस्तु उत्पादक अमृत, कुक, रामदेव, धारा, सनफ्लो, स्वस्तिक, गगनलगायत ब्रान्डले मूल्य बढाएको खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘खानेतेल भारत पठाउँदा एक लिटरमै ५० रुपैयाँ फाइदा हुन्छ । त्यसैले यहाँ अभाव गराएर भारत पठाउने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘मूल्य बढेको सन्दर्भमा सरकारलाई जानकारी गराए पनि सरकारले केही भएन ।’
श्रेष्ठका अनुसार विभागका केही कर्मचारी मिलवालाकै पक्षमा बोलिरहेका छन् । जसले गर्दा थप जटिलता भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘विभागकै कर्मचारीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेको छ । मिलले दिएको मूल्य ठीकै हो भन्दै मिलवालाको पक्षमा उभिएका छन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘सबै मिलीभगत छ यहाँ ।’ मूल्यवृद्धिका विषयमा संघले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासघ र चेम्बर अफ कमर्सलाई जानकारी गराउने निर्णयसमेत गरेको उनले बताए ।
यता नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघका अध्यक्ष सुबोध गुप्ताले भने तेलको मूल्य बढ्नुमा आन्तरिकभन्दा बाह्य कारण भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि उत्पादन कम छ, माग बढी भएपछि मूल्य प्रभावित भयो,’ उनले भने, ‘स्वदेशी उद्योगले चाहेर पनि मूल्य बढाउन सक्दैनन् । केही व्यक्ति र व्यापारीले बढाएका होइनन् । यसको कारण अन्तर्राष्ट्रिय नै हो ।’
स्वदेशमा पर्याप्त उत्पादन नहुँदा तेलमा पनि आयातकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । उद्योगीहरूले सिंगापुर र मलेसियाबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्छन् । त्यसपछि यहाँ रिफाइन गरेर पुनः भारत पठाउने गरिएको छ ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका प्रवक्ता शिवराज सेढाईंले अनुगमन र मूल्य विश्लेषण गरिरहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘हामीले व्यवसायीलाई बोलाएर मूल्य बढ्नुको कारण सोधेका थियौं । छलफलका क्रममा उनीहरूले आयातमै महँगो बताए । अहिले खरिद र बिक्री विवरण मागेका छौं,’ उनले भने, ‘एक–दुई दिनमा रिपोर्ट आउँछ । मूल्यवृद्धि प्राकृतिक हो कि कृत्रिम भन्ने पुष्टि भएपछि एक्सनमा जान्छौं ।’ वास्तविक कारण पत्ता नलागेकाले कसैलाई कारबाही गर्न नसकिएको उनले बताए ।
Previous articleसंसद विघ’टन देखि नेकपा विभाजनसम्म भार’तको यस्तो खेल, राष्ट्रवादी देखिएका ओलीलाई नै भारतले गर्यो प्रयोग
Next articleपुरै देश ह’ल्लिने गरि भर्खरै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको यस्तो घो’षणा, संसद विघ’टनपछि पहिलो पटक बोले
बर्त बसेर एक थोपा पानी नखाई भोक भोकै मन्दिर गएकी निलमको मन्दिर नपुग्दै गयो ज्या’-न (सबै सजक रहन सेयर गराै)
पब्जी र फ्रीफायर बन्द गर्न सांसद विकको माग (सहि कि गलत ?)
संसदमा च’र्का’चर्की: आफ्नै पार्टीको सरकारलाई गगनको कडा चे’ताव’नी, यो सरकारलाई यस्तो अप’राध गर्ने छुट छैन (भिडियो हेर्नुहोस)
Contact us: public24khabar.com
बर्त बसेर एक थोपा पानी नखाई भोक भोकै मन्दिर गएकी निलमको...
पब्जी र फ्रीफायर बन्द गर्न सांसद विकको माग (सहि कि गलत...
संसदमा च’र्का’चर्की: आफ्नै पार्टीको सरकारलाई गगनको कडा चे’ताव’नी, यो सरकारलाई यस्तो...